Kununurwa Kunamata Kubva Pakunyura Mubhedha | NZIRA DZOKUNAMATA
musha Pfungwa dzemunamato Kununurwa Kunamata Kubva Pakunyururwa
Kununurwa Kunamata Kubva Pakunyururwa
Nhasi tichange tichitarisana nemunamato wekudzikinura kubva pakunyura pamubhedha. Bhuku raMuparidzi 3: 1-8 rakatsanangura kuti kune nguva yezvinhu zvese zvepanyika nguva yekuzvarwa uye nguva yekufa. Saizvozvowo, pane nguva muhupenyu hwevanhu apo kunyurura pamubhedha kunofungidzirwa kunge kwakajairika. Nekudaro, kana mwana akatarisa rimwe zera uye iye kana asina kumira kunyorova pamubhedha, zvino rinova dambudziko. Kana mwana akura achienderera mberi bedwet, zvinonyadzisa mwana uye kuzvidza vabereki.
Bhuku ra Pisarema 20:25 Chengetedza mweya wangu, uye ununure; Ngandirege kunyadziswa, nokuti ndinovimba nemi. Mambo David murugwaro urwu vari kukumbira Mwari kuti vamuchengetedze kubva kunyadzi. Sokungodaidza kwakaita David kuna Mwari kuti amununure kubva mukunyadziswa uye pakuzvidzwa, newewo unodana kuna Mwari kuti ubatsirwe uye nyadzi dzinobviswa Iko kunyara uye kushorwa kunouya nekuwacha pamubhedha kunyanya kune munhu mukuru hakugone kuverengwa. Dzimwe nguva, dhiabhori nemaune anoshandisa kunyorovesa pamubhedha kunyadzisa vamwe vanhu. Kuti murume akura zvakakwana haazokwanise kubata dundira rake kana varara. Zvinounza kunyadziswa zvachose.
Kana izvi zvikaitika kwauri, haufanire kuzviona sechimwe chinhu chakajairika. Ino ndiyo nguva yekusimudza aritari yemunamato kupokana nemweya wese wekuwacha pamubhedha. Rugwaro runoti tsiura dhiabhori uye zvinotiza. Unogona kutsiura mweya unokonzera kuti urare wakanyorova. Rugwaro runoti zivisa chinhu uye zvichasimbiswa. Paunonamata ishe anopindura uye dhimoni rinokukonzeresa kuti uvete wakanyorova richakutiza.
Ishe Jesu, ndauya pamberi pezuva rino kuzonyoresa kurwadziwa kwemoyo wangu. Ndauya kwauri kuzotaura nyadzi dzangu newe. Ndakarohwa nedhimoni remubhedha kunyorova uye ndakaedza nzira dzese kuzvisunungura kubva kwazviri asi zvese hazvina zvazvakabatsira. Ndinonamata kuti mweya wako undibatsire nhasi muzita raJesu.
Baba Tenzi, zvakanyorwa, rambai dhiyabhorosi uye ichatiza. Ndinotsiura dhimoni rese rinokonzeresa kuti ndirare ndakanyorova chero nguva pandinovata usiku. Ndinonamata kuti moto waMwari Wemasimbaose uparadze dhimoni rakadai pamberi pangu muzita raJesu.
Ishe, ndinozvisunungura kubva pamaketani ese emadhimoni akaisa muhusungwa zvichikonzera kuti ndirare ndakanyorova nguva dzese. Ishe, nekuti zvakanyorwa kuti mwanakomana akasunungura akasununguka zvirokwazvo, ndinotaura Rusununguko rwangu muchokwadi nemuzita raJesu.
Ishe, ndinonamata kuti simba raMwari rimutse muviri wangu unofa kurwisa dhimoni remubhedha unonyorova muzita raJesu. Tenzi, ndinonamata kuti simba renyu rindimutse pese panenge pazara dundira rangu uye ndobva ndagadzirira kuburitsa mvura, ndinonamata kuti simba raMwari rindimutse kubva kuhope muzita raJesu.
Ini ndinopesana neese marongerwo ehurongwa mumutsara wangu unokonzeresa vanhu vakuru mumhuri yangu kuti varare vakanyorova uye vanopedzisira vanyara. Ndinotsiura kurongeka kwakadai pamusoro pehupenyu hwangu nhasi muzita raJesu.
Ishe, ndinotsiura mhando dzose dzekutukwa kwemadzitateguru dzinoshanda mumhuri yangu dzichiita kuti ndirare ndakanyorova. Ndinoraira nesimba rematenga, kutuka kwakadai kunoparadzwa muzita raJesu. Chinyorwa chinoti Kristu akazviita rushambwa pachinzvimbo chedu, nekuti tituke iye akasungirirwa pamuti. Ini ndinouya kuzopokana nekumwe kutuka muhupenyu hwangu muzita raJesu.
Ishe, kushushikana kwese kwedhimoni remubhedha kunonyorovesa izvo muvengi ari kushandisa kwandiri. Nekuti zvakanyorwa, taura chinhu uye zvichasimbiswa. Ndinoraira nemvumo yedenga kutambudzika kwakadai kunoparadzwa muzita raJesu. Chinyorwa chinoti matambudziko mazhinji emunhu akarurama asi Mwari akatendeka kumununura kubva kune vese. Ndinonamata kuti mundisunungure kubva padambudziko iri muzita raJesu.
Ishe Jesu, ndinovimba nezita renyu chete, musandirega ndichinyadziswa. Ndinonamata kuti simba renyu ribvise nyadzi dzangu muzita raJesu. Ndinonamata kuti dhiabhori anyadziswe pamusoro pehupenyu hwangu muzita raJesu.
Ishe, ndinotaura kukunda kwangu pamusoro pemadhimoni emubhedha kunyorovesa nesimba nesimba muzita raJesu. Nekuti zvakanyorwa kuti, kana chero munhu achataura, ngaataure sechirevo chaMwari. Ini ndinodudza nemasimba edenga, kukunda kwangu kwave muzita raJesu.
Ishe, rugwaro runoti, ini nevana vangu tiri vezviratidzo nezvishamiso. Ishe, kunyorova pamubhedha hakusi kushamisika kwakanaka. Ndinonamata kuti uibvise muzita raJesu. Zvese muhupenyu hwangu zvichaunza ruzvidzo kuzita rako dzvene, ndinonamata kuti moto waMwari Wemasimbaose uvaburutse muzita raJesu.
Ishe, kurwa kwese kwakatumirwa nadhiyabhorosi nengirozi dzake kundinyadzisa, kundinyadzisa, ndinonamata kuti vaparadzwe muzita raJesu. Ishe, ndimi mune simba, Mutsvene waIsreal, ndinonamata kuti imi mukunde hondo dzangu dzese muzita raJesu.
Mweya wese wemubhedha wanyorova, ndinokutuka nhasi muzita raJesu. Kutuka kwese kuri kushanda muhupenyu hwangu, kuri kundiomesera kurega kunyorova pamubhedha, ndinonamata kuti kutuka kwakadai kuputswe muzita raJesu.
Ishe, zvinyadzo zvese muhupenyu hwangu, ndinotema kuti vatorerwa muzita raJesu. Zvese zviri kundikonzera kuchema misodzi muchivande, ndinonamata kuti simba raMwari Wemasimbaose ribvise muzita raJesu.
Ndinokutendai Ishe nekupindurwa kweminamato, zita renyu ngarikudzwe muzita raJesu.
Previous nyayaKunamata Kunongedzera Kurwisa Goriati Muhupenyu Hwangu
inoteveraKunamata Kunongedzera Kukomborera Mota Nyowani
Kunamata Kunongedzera Kuti utaure Pakati Pakati Pehusiku
Makumi gumi nemashanu eminamato yekusimudzira pabasa
30 Ndima dzeBhaibheri Nezve Mhuri
30 Minamato Yebudiriro MuJAMB bvunzo